Mpanamboatra sy mpamatsy tadin'ny geophone - Orinasa Geophone String Factory
Ny geophone andian-tsarimihetsika B dia misy fantsom-pandrefesana malalaka sy fahita matetika. Ny fandeferana rehetra dia fehezin'ny 5%. Ny firafitry ny coil roa tsy manam-paharoa dia mampihena be kokoa ny fanovana. Endri-javatra: fitoniana tsara Fivoarana avo lenta sy mari-pamantarana mari-pamantarana Product Product: Parameter \_ Mode YB-A003 (20 ℃) ​​Frequément naturel (Hz) 100 ± 5% Coil Resistance (Ω) 1084 ± 5% Sensitivity (V / m / s) 39 Fahatsapana fihenam-bidy 5% Miaraka amin'ny Resistor Shunt (V / m / s) —— Mampitony 0.42 ± 5% Manamaivana ny ...
5 Hz Low Freqnecy Fahazoan-dàlana avo Geophone 1.5 taona Warranty YB-A032
PS-5R dia geophone vaovao manasongadina fahita matetika sy fahita voajanahary ambany. Ny fahatsapana hafahafa dia azo ampitahaina amin'ny geofone. Endri-javatra: Freqnecy ambany: 5 Hz fahatsapana avo raha oharina amin'ny geophone mahazatra: 83V / m / s lanja maivana ary mora aparitaka ny vokatra Famaritana: Parameter / mode PS-5R (20 ℃) ​​Frequement naturel (Hz) 5 ± 10% Coil Resistance ( Ω) 2950 ± 5% Sensitivity (V / m / s) 83 ± 8% Manamaivana 0.7 ± 10% Frequency Frequency (Hz) ≥120 Distortion (%) -0.2 Max.Motion (mm) 2.54 Moving Ma ...